China iphepha emele Ukwenziwa kunye Factory | JAHOO
Ukucaciswa kweMveliso Ubungakanani boMlinganiso wePhakheji yePhepha Ubungakanani be (cm) Ipopcorn kunye nephetshana lePhepha leenkukhu elibiweyo 32oz 11.6 * 8.9 * 14.5 230g + 18pe 10pks * 50pcs 60 * 25 * 57 46oz 12.0 * 8.9 * 17.7 230g + 18pe 10pks * 50pcs 62 * 26 * 59 64oz （mfutshane kunye namafutha） 16.7 * 13 * 13.7 ...
Ipopu kunye nepheyile lephepha leenkuku eziqhotsiweyo
64oz, mfutshane kunye namafutha
Ngama-52 * 35 * 63.5
64oz, ubude & ibhityile
Ama-350 + e-PE angatshatanga
Ibhokisi yenkukhu eyosiweyo. Ibhakethi lephepha elilahlayo. Ukuhambisa nokuhambisa inkuku eyojiweyo kunye nezinye izinto zokutya ezishushu. Iphepha elinyangiweyo lokumelana nokungena kwegrisi kunye nokuvuza.
Nokuba kukutya okulondolozwayo okanye ukutya okutsha, xa ufuna ukuthengisa okanye ukuhambisa ukutya okanye uthi ukuba ufuna ukubonelela ngenkonzo yokuhanjiswa kwekhaya yokutya emva koko ukupakishwa kwamaphepha kungangena ngokufanelekileyo.
Iphepha elenziwe ngokupakishwa kokutya lelona lifanelekileyo lokutya kunye neemveliso zabathengi kwintengiso.
Ngobuchwephesha bethu bamva nje, ukupakishwa kwephepha kuye kwaba sisitshixo sokugcina kunye nokuthengisa iimveliso zokutya kwintengiso ngobuchule obungapheliyo. Enye yezinto eziphambili ekufuneka sizikhumbule ngelixa uthengisa into enovakalelo njengokutya kukuqinisekisa ukuba umgangatho wayo uhlala ungagungqi kwaye ukupakishwa kwephepha lokutya kuyanceda.
Kukho imfuno eninzi yolu hlobo lokupakisha kwishishini lokutya.
Uninzi lweenkampani ezinkulu zixhomekeke kumzi mveliso wokupakisha ukubonelela ngeephakeji ezifanelekileyo kwiimveliso zazo.
Egqithileyo iphepha lephepha
Popular eqhotsiweyo iphepha inkuku emele ukutya cu ...